SEVERIN PG-8534 Grill ~ ICT.com.mm
HomeSEVERIN PG-8534 Grill
SEVERIN PG-8534 Grill
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခြံဝင်းထဲမှာ မိသားစုနဲ့အတူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် Brabecue ပွဲလေးကျင်းပနိုင်ဖို့ အသုံးဝင်တဲ့အသားကင်စက် လေးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်အသုံးပြုနိုင်အောင် Stand တပ်စင်ပေးထားပြီး ပစ္စည်းတွေတင်ဖို့အတွက်လည်း နေရာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်၊ လျင်မြန်တဲ့အပူပေးစနစ်၊ ဖြုတ်/တပ် လုပ်လို့ရတဲ့ လေကာနဲ့ အပူချိန်ညှိစက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အပူကို တသမတ်တည်းဖြန့်ပေးထားတာမို့ အကောင်းဆုံးအကင်အရသာတွေကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Power Output က 1,600 W ရှိပြီးတော့... [Learn more]
Brand: SEVERINSKU: 123332N/ASee more: Cooking & Appliance, Mega Marine, Products, Recent Updates, SEVERIN, ShopFilter by: MM, Outdoor Cooking
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခြံဝင်းထဲမှာ မိသားစုနဲ့အတူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် Brabecue ပွဲလေးကျင်းပနိုင်ဖို့ အသုံးဝင်တဲ့အသားကင်စက် လေးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်အသုံးပြုနိုင်အောင် Stand တပ်စင်ပေးထားပြီး ပစ္စည်းတွေတင်ဖို့အတွက်လည်း နေရာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်၊ လျင်မြန်တဲ့အပူပေးစနစ်၊ ဖြုတ်/တပ် လုပ်လို့ရတဲ့ လေကာနဲ့ အပူချိန်ညှိစက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အပူကို တသမတ်တည်းဖြန့်ပေးထားတာမို့ အကောင်းဆုံးအကင်အရသာတွေကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Power Output က 1,600 W ရှိပြီးတော့ အရွယ်အစားက L: 38 x W: 22.4 cm ရှိပါတယ်။ အခြားအသားကင်စက်တွေနဲ့မတူတဲ့ iron plate ကိုအသုံးပြုထားလို့ အကင်တွေကပ်ငြိမှုမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ညှော်နံ့နဲ့ မီးခိုးလည်းအထွက်နည်းပြီး အောက်ခြေက stand ကိုလည်း ဖြုတ်ပြီးသုံးနိုင်တာမို့ အိမ်တွင်းမှာ စားပွဲပေါ်တင်ရင်း အကင်တွေကို ပူပူနွေးနွေးသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် Steel ကိုယ်ထည်၊ safety micro-switch ၊ တို့ပါဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာလည်း လွယ်ကူတဲ့ အသားကင်စက်ဖြစ်ပါတယ်။
High Power: 1600 W / Size of the grill area: 38 × 22 cm / Mass: 3.21 kg / Size(H*L*W): 11.5 × 49.8 × 36.5 cm / Barbecue grill / cast plate removed / large, detachable windshield / stable stand base with handy storage shelf
Grill fun on the balcony or in the garden: Barbecue grill for the quick preparation of delicious grilled food - Including stand base with storage rack.
High temperatures, fast heating: Optimal preparation of juicy food thanks to large and removable windscreen and temperature regulator, Uniform heat distribution thanks to continuous heating coil, Max. Output of 1,600 W.
Typical grill pattern with non-stick cast iron plate withalarge L: 38 x W: 22.4 cm, low smoke and odor development withawater-filled grill pan, also usable asatable grill by removing the stand base.
High-quality, enamelled steel housing, safety micro-switch, easy cleaning due to removable cast iron plate and heating element.
Scope of supply: 1 SEVERIN barbecue grill, PG 8534, material: enamelled steel casing / plastic, dimensions (L x W x H): 49.8 x 36.5 x 11.5 cm, weight: 3.21 kg, color: black.
This item: SEVERIN PG-8534 Grill K146,563